PhotoModeler, ukulinganisa nokulinganisa ihlabathi lenene-i-Geofumadas
NgoJulayi, 2009 Zobunjineli, ezintsha
I-PhotoModeler iyisicelo sesistimu ye-EOS, esenziwe nge-SDK I-leadTools, eyona nto ibhetele ndiyibonile, ikuvumela ukuba wenze izinto ze-3D kunye neemeko ezivela kwiifoto kwi-technique ebizwa ngokuba yi-photo modeling. Ngaphambi Ndabaxelela nge-MDL osebenza kunye ne-Microstation, kodwa kule ngxaki sithetha ngeprogram epheleleyo ngaphandle kokuba imodeli ibandakanya ukusebenza kwe-scanner.
Umgaqo wesithombe esikhethiweyo isekelwe kuhlobo oluthile lwe "imbonakalo echaseneyo", apho kucingwa ukuba nayiphina ifoto ethathwayo igcina iimpawu ezithile zengcamango ezinokuthi zitshintshelwe ekwakhiweni kwezinto ezintweni ezintathu.
Iimpawu ze-geometri ezisisiseko, ezona zakhiwo ezininzi ezakhiwayo, ziyizibalo ze-geometrical elula, ezifana nama-parallelogram, ii-cones, iipramramid. Ukuba unako ukunika imilinganiselo kule geometri ukusuka kwimigca, amanqaku eenkcukacha kunye namanani aqhelekileyo awenza ezi geometri njengama-rectangles, izikwere, izangqa okanye iipolgoni eziqhelekileyo ngoko kunokwenzeka ukudala amanani amathathu. Njengengqinisiso eyongezelelweyo, songeza ubuso obuninzi (ngaphambili, ngaphantsi, ngasekhohlo, kunene, phezulu nangaphezulu) kunye namanyathelo awaziwayo.
Le nkqubo iquka i-autoforms eziqhelekileyo, onokubanika umfanekiso wesibhakabhaka, amaphuzu, ubuso, imigca kunye nemikhawulo yokuhamba yento ukuba ithathe umlinganiselo wangempela.
Iifoto ezininzi ozenzayo, iinjenge ezahlukeneyo, imilinganiselo yangempela kunye nesisombululo esiphezulu kunokwenzeka ukufumana imeko echanekileyo yokuchaneka. Nangona le nkqubo iquka uluhlu olubanzi lwezixhobo zekhamera okanye iimeko zokubamba ezinokuqwalaselwa kwiziphumo ezingcono.
Into elandelayo nje ukukhetha uhlobo luni lomgangatho olulindelekileyo, ukusuka kumgca wecala ukuya kumatshini angabelwa kwiindawo. Kungokunokwenzeka ukuthunyelwa kwi-dxf yokusetyenziswa kunye nezinye iinkqubo ezisetyenziswa rhoqo.
Ezi ntlobo zinokusetyenziswa kwi:
Ukulondolozwa kwezakhiwo zembali
Ukumodareyitha kunye ne-3D
Ngokweenkcukacha, kukho izinto ezithile zokusebenza kunye ne-orthophotos, kunye noko kuqondwa ukuba kunokusetyenziswa kwi-photogrammmetry, nangona kubonakala ngathi ayizange ibe ngumthengi wayo oyintloko.
Isicelo sinokungenani izilwanyana ezintathu eziqhelekileyo, ukusuka kwi-$ 995:
Oku kufaka iimpawu zokudala izinto zeempawu ezivela kwiifoto, kwakunye nokucwangciswa kwezakhiwo zekhamera kunye nomfanekiso wesisiseko somntu.
Kule ndlela, amandla okudala iiflathi kwiimodeli zongezwa, ukuprinta into ngendlela enokuphinda ivuselelwe ngokwenyama. Kwakhona kunokwenzeka ukuba ulandelelanise ezinye iinkqubo.
Kule nguqulo kukho ukhetho lokudala indawo ezinqongileyo kunye namanani amaninzi.
Ungabona ulwazi oluthe xaxa kwiphepha le-PhotoModeler, unokukhuphela inguqulo ye-demo, equka imizekelo kunye nempawu ezininzi; nangona kungengabo bonke.
Post edlulileyo«Edlulileyo Phantse i-10 ibinzana elilodwa le-catracha crisis
Post Next MobileMapper 6, ukuqala kokuqalaOkulandelayo "